dulsaarka General waqtiga amaahashada lacagta maaliyadda macaamilka
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ dulsaarka General waqtiga amaahashada lacagta maaliyadda macaamilka
Inkasta oo dib u eegis deg deg iyo amaahda waa sifooyinka maaliyadda macaamiisha, ma aha oo kaliya marka kiro ah, ama sidoo kale loo isticmaalaa in lagu fekero in marka aad soo laaban? Marka aad soo celiso waa
bixin xiiso ma aha oo kaliya xaddiga lacagta amaahatay. Marka aad amaahato lacag ku
maaliyadda macaamiisha, soo bandhigi doonaa ah oo ku saabsan xaaladda waa dulsaarka, sida by kala duwan.
Waqtiga amaahashada ka xirfad iyo heerka shaqada waa ka duwan yahay taas oo ku xidhan deyn
lacag, shaqo ee hadda iyo dakhliga sida waraaqaha dib u eegis, waxaa lagu weydiin doonaa inaad ku saabsan sano ee adeegga.
kala duwan yihiin dulsaarka by shaqadaada iyo shaqada, kaas oo la tilmaamay waqtigaan la joogo, laakiin waxa ay si gaar ah u fudud in la beddelo oo u dhiganta hal .3 hoos.
waqti-dhiman ama ka shaqeeya qayb
dulsaarka markii dadka
shaqo waqti-dhiman oo qayb ka tageen inay amaahda, kala duwanaan doonaa by Tirada Sanooyinka aad shaqaysay iyo dakhliga.
oo aan muddo dheer bilaabay shaqada weli waa u janjeera in xoog lagu dhejiyo dulsaar xad sare. Haddii sanado badan si ay u sii
beddeli at kuwa hayo nooc ka mid ah dakhliga, waxaad arki kartaa in ay la amaahashada hoos shardi ah in aysan waxba ka beddelin la shaqaale caadi ah.
bulshada ama isbedel shaqooyin cusub
ay dhacdo bulshada cusub, iyo sidoo kale bilaabay shaqada sida a waqti-buuxa ah, inta badan credit lagu arkay hooseeyo.
darteed, inta badan in lagu wadaa in la sii kordhay dulsaarka.
waxa uu leeyahay in ay sameeyaan in ay jiraan waa wax macquul ah in sida hawlgabka ama fasax, dakhliga hoos u lahaa in aad u daran ah.
waqti-buuxa ah hooyooyinka guri iyo ardayda
the case of hooyooyinka waqti-buuxa ah iyo ardayda, si ay u noqdaan loola dhaqmo sida shaqo la'aan ah, waxa aanu u ogolaan amaahashada lacagta mabda'a by hadda ee Money amaahda Law Business ee. Haddii aad
ardeyda waxaa lacag shaqo waqti-dhiman ah, haddii guri joogta ah waa inaad soo amaahato ogolaansho ninkeeda, qaaday dakhligooda sida xisaabinta dulsaarka tixraac waxaa loo sameeyaa.
xiisaha ay dhacdo dayn badan ee dulsaarka
caydh badan ayaa amaahda ah inta badan waa kiiska, kaas oo qarka u saaran inuu ku dhow xadka sare ee daqiiqadii ugu danbeysay.
Tani waa, ugu dambeyntii inta badan sabab u leedahay in halis sare oo keentay in xoojinta deynta ah. In ka badan wax amaahisaan lacag
ah, sida maaliyadda macaamiisha in ay ku talaabsato baaritaanka si weeyn in aad abaalmariyo.
Sababtan awgeed, in dulsaarka amaahda ah waa heer sare ah oo loogu talagalay dadka ku yar yahay, waxa soo baxaya faa'iido uu noqdo dhaqanka caadiga ah.
Intaa waxaa dheer, in maal macaamiisha loo yaqaan Machikin ah, waxaa la siiyaa ay baaritaan u gaar ah, heshiis amaah ah ku fuliyay in kiiska dayn badan.
Si kastaba ha ahaatee, qiyaasta dulsaarka waxa lagu gartaa wax badan daqiiqada ugu danbeysa, oo waxaa lagu qeexay sharciga. Amaahatay fudud
Dhanka kale, amaahda ee Machikin, si aad u yidhaahdaan, Ma jiraan dhaqanka halis ah, isticmaalka noqon lahaa wanaagsan ka filan loo arkaa in uu jiro doorashada kasta oo kale.
muuqaalada Maliyada macaamiisha keentay
TV iyo CM inta badan arki maaliyadda macaamiisha keentay iyo sida. Waxa kale oo jira in aad ku qoran qaar ka mid ah in stock
, lacagaha maamulka weyn, oo ay ku jirto caasimada waxa lagu gartaa.
waayo, in, ama kiis in xitaa heerka dulsaarka hooseeya aysan waxba ka beddelin bangiga, sidoo kale taageertaa shirkadda u fiican doono ama qaar badan oo u bixinta lacagta. In
kuwanu waxay ahaayeen xirfad leh ee farshaxanka, wax soo jiidasho leh waa sidoo kale ka mid noqon doona in aad ii yihiin oo soo bandhigay sida a-qorshaha pre habka amaahashada adiga kugu habboon ka.
iyo dumarka oo kaliya amaahda waa lagu dayan karo, waxaa jira olole dulsaarka.
? amaah dumarka-keliya The
amaah haweenka oo kaliya, waa qorshe ku jirtay oo male ah in uu u saxiixo kor loogu tala galay dumarka jidka magaca in. dakhli sannadeedka
waa in ay hoos u muuqdaan in ay haweenka sida ragga marka la barbar dhigo, feature waxay noqotay si fudud inuu ku soo laabto heerka dulsaarka hoose.
warqadihiisa telefoonka, sida ay sidoo kale oo dhan la samayn doonaa in dumarka, maxaa yeelay, waxaa sidoo kale waa dareen ah ammaanka.
? dulsaarka bil bixinta ugu horeysay qorshaha
0 qorshaha in ka dhigan tahay in aan qaato lacag dheeraad ah haddii loo abaalgudi muddo amaahatay sidoo kale u muuqday gudahood.
Tani waa waxa = xiiso amaahan walaaca lacag, si ay u kala firdhinta image ee.
The asal ahaan noqon doonaa isticmaalka koowaad ee amaahashada waqtiga laakiin keliya, run ahaantii u baahan tahay lacag, sidaa darteed waa in kaa caawin markii loogu yeero. Haddii ay jirto saadaal ah in dib loo bixiyo karaa muddo
gudahood, waxa ay noqon doontaa doorasho ku haboon.
maaliyadda macaamiisha sidoo kale waxay ku xiran tahay xirfadaha iyo shaqada.
Si kastaba ha ahaatee, xataa shaqada sida wakhtiga qayb-iyo waqti-dhiman shaqooyin, si aannu u yihiin sidoo kale isku halaynta dheer ee dhererka adeega, inta badan waa iyada oo heerka baaritaan xataa hoose.
Gaar ahaan, Maliyada macaamiisha keentay, daymaha iyo sidoo kale bankiga, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inuu isticmaalo heerka dulsaarka hoose.
Dabcan waxaa jira baaritaan macluumaad credit, laakiin waxaad yeelan doontaa amaahashada xariifnimo haddii aad doorato mid ka mid naftayda ugu fiican iyadoo la tixraacayo qorshaha kala duwan haddii qaadeen for codsiga markii ugu horeysay.